Blockchain waa carqaladaynta ugu weyn ee ganacsi silsiladda qaybta. Farsamadan, oo sanado badan ku soo jirtay qaab khuraafaad ah, ayaa hadda gaadhay meel wax laga tilmaamo; blockchainSaamaynta waxa dareemi doona qof kasta ganacsi siinta adeegyada ama ku raridda alaabada jirka ee badan dhufto ee. Blockchain, kalsoonida ugu dambaysa, waa tiknoolojiyadda hoose ee gabi ahaanba beddeli doonta warshad kasta, ka -qaybgalayaasheeda iyo hab -socodkeeda labadaba. Khubarada ayaa saadaalinaya taas blockchain carqaladayn doonaa silsiladda qaybta 2018 iyo wixii ka dambeeya. Farsamadan ayaa jirtay sanado, laakiin hadda waxay u jirtaa heer dhab ah oo karti ah. BlockchainSaamaynta waxa dareemi doonta qof walba ganacsi siinta adeegyada ama ku raridda alaabada jirka ee badan dhufto ee.
U samaynta wax kala iibsiga sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah: Dhisida xawlidii sannadkii hore, blockchain wuxuu awood u leeyahay inuu carqaladeeyo ganacsiyada waaweyn sida ay u taagan tahay qaybta lacag bixinta. Iyada oo si weyn hoos loogu dhigayo kharashaadka wax kala iibsiga, helitaanka iyo duubista macluumaadka saxda ah, iyo maaraynta silsiladda khatarta, blockchain waxay siisaa fursad balaayiin dad ah oo adduunka oo dhan ah inay wax ku kala iibsadaan tirooyin degdeg ah - suurtagalna ah xitaa degdeg ah. Sida Simon Robinson - blockchain iyo hogaanka fintech, Roblox waxa uu qabtay webinar bishan, isaga oo sahaminaya sida tignoolajiyadani ay wax uga bedeli karto waaxda adeegyada maaliyadeed iyo saamaynta ganacsiyada adduunka oo dhan. "Xawaaraha aad wax ku kala iibsan karto weligii si degdeg ah uma korin. Farsamada ka dambeysa blockchain waxa uu ku korayaa xawli aan la rumaysan karin”. "Blockchain iyo shirkadaha fintech waxay noqon doonaan kuwa ugu horreeya ee safka "si ay u qaataan tignoolajiyadan, ayuu yidhi. 22% dakhliga Roblox $2.1 bilyan sanadka 2019 wuxuu ka yimid lacag-bixinno. Oo intii shirkadu waxay bilowday inay hormuud ka noqoto korsashada blockchain in financial services in 2018, there are still many areas for the bangiyada and fintech industry to adopt and optimise. For Example, as we have moved forward it has been required by regulators that multiple players in the bangiyada and fintech industry innovate and optimise their ganacsi moodooyinka si ay ugu tartamaan farsamadan.
Waxaa laga yaabaa in hal meel oo muhiim ah oo iskaashi ah oo loogu talagalay warshadahan oo kale ay tahay iyada oo loo marayo blockchain xubnahooda. Halka tiro badan oo ah blockchain GOORMUU in la iska kaashado sidii la isku dhaafsan lahaa khibradda tignoolajiyada loona dhisi lahaa mid cusub ganacsi moodooyinka - oo hoos u dhigaya labadaba kharashka horumarinta iyo wakhtiga horumarinta ee codsiyadooda.
Blockchain waa Xabagta Adkeysiga ah ee maamusha nidaamka xogta kaliya, laakiin sidoo kale nidaamyada maaliyadeed. Halka hababka dhaxalka loo sameeyay si wax looga qabto mid, laakiin qadiimi ah ganacsi xaaladuhu waxay u baahan karaan xal cusub oo tignoolajiyadeed oo cusub; blockchain waxay u suurtagelisaa macaamiisha iyo masuuliyiinta xilalka hayaba inay si farxad leh u wada noolaadaan. Shirkadaha iibsanaya alaabo ama adeegyo, blockchain sahlaysa codka Maamulka mashruuca; qabanqaabada ganacsiga oo ay dhiirigelisay blockchain fududeeyo ganacsiga cadaalad ah. Sidoo kale, shirkadaha wax iibsanaya ama iibsanaya adeegyada, blockchain awood codsiyada ku xidhan buugaagta aan bedeli karin, aan bedeli karin si ay u buuxiyaan shuruudaha maamulka joogtada ah dhammaan daneeyayaasha iyo nidaamyada. Tani waxay bedeli doontaa silsiladda iyada oo awood u siineysa bixinta qaansheegta iyo bixinta u dhaxaysa ka qaybgalayaasha silsiladda, hubinta dhaqdhaqaaqa badbaadada iyo hufnaanta leh ee badeecadaha iyo adeegyada inta lagu jiro oo dhan. Falanqaynta horudhaca ah eMarketer ee blockchain maalgelinta ayaa tilmaamaysa in qaadashada blockchain way sii dardar gelin doontaa marka shirkaduhu ogaadaan in caddaynta fikradaha mar hore si guul leh loo soo saaray. Blockchain + waa tignoolajiyada soo koraysa oo xajisa balan qaadka ah in wax laga bedelo sida silsiladaha sahaydu u shaqeeyaan iyadoo la taaban karo faa'iidooyinka blockchain iyo tignoolajiyada ledgerka la qaybiyay. Noocan ah blockchain waxay ku siin kartaa hab cusub oo asal ah silsiladda maaliyadda, taas oo hoos u dhigi karta kharashaadka, hagaajinta hawlaha, oo fududayn karta xallinta macaamil ganacsi ee u dhexeeya dhinacyada ku lugta leh silsiladda. Falanqaynta horudhaca ah eMarketer ee blockchain maalgelinta ayaa tilmaamaysa in qaadashada blockchain way sii dardar gelin doontaa marka shirkaduhu ogaadaan in caddaynta fikradaha mar hore si guul leh loo soo saaray.